China 330kV kabili iluphu umugqa umbhoshongo Ukwakha futhi Factory | XY Umbhoshongo
330kV double loop line tower
Kungani i-XY Tower
Ingqalasizinda ye XY Umbhoshongo：
Inhliziyo yanoma iyiphi indawo yokukhiqiza ingqalasizinda yayo. I-XY Tower inamandla afakiwe okukhiqiza amathani angama-30,000 emibhoshongo ngonyaka.
I-XY Tower isilungele ukuhlangabezana nezindinganiso zekhwalithi eziqine kakhulu emhlabeni.
Izakhiwo ezakhiwe kahle, imishini yokukhiqiza enomshini kanye nezindawo zokugcina ezinkulu zensimbi zinikeza imikhiqizo yekhwalithi ye-XY Tower ngokwezidingo ezingemuva zamakhasimende.
Imboni yokwakha eChengdu yakhiwe esizeni esilinganisa i-35,000 sq. Meter. Ihlanganisa abasebenzi abanamakhono kakhulu nengqalasizinda yokukhiqiza yesimanje ukuqinisekisa imikhiqizo esezingeni eliphakeme kakhulu.
Yakhelwe kwenye indawo engamamitha ayisikwele ayi-7000 yesitshalo se-galvanizing.
Ifaka ubuchwepheshe bamuva be-dip galvanizing ezishisayo zezakhiwo ezahlukahlukene.
I-transmission tower isakhiwo esinde, imvamisa umbhoshongo wensimbi, osetshenziselwa ukuxhasa ulayini wamandla aphezulu. Sinikela ngale mikhiqizo ngosizo lwe-
abasebenzi abakhuthele abanolwazi olukhulu kulo mkhakha. Sibheka inhlolovo yomugqa eningiliziwe, amamephu womzila, ukubona imibhoshongo, ukwakheka kwamashadi nedokhumende lamasu ngenkathi sinikela ngale mikhiqizo.
Umkhiqizo wethu uhlanganisa i-11kV kuye ku-500kV ngenkathi ifaka uhlobo oluhlukile lombhoshongo ngokwesibonelo ukumiswa kombhoshongo, umbhoshongo wobunzima, i-angle tower, umbhoshongo wokuphela njll
Ngokwengeziwe, sisenalo uhlobo olukhulu olwakhiwe lombhoshongo nensizakalo yokuklama okufanele inikelwe ngenkathi amaklayenti engenayo imidwebo.
Igama lomkhiqizo Transmission umugqa umbhoshongo
Umkhiqizo XY Towers
Amandla ebanga 220 / 330kV
Ukuphakama kwegama 18-48m
Izinombolo zomqhubi wenqwaba 1-6
Ijubane lomoya 120km / h
Isikhathi sokuphila konke Iminyaka engaphezu kwengu-30
Ukukhiqizwa okujwayelekile I-GB / T2694-2018 noma ikhasimende liyadingeka
Impahla eluhlaza I-Q255B / Q355B / Q420B / Q460B
I-Raw Material ejwayelekile GB / T700-2006, ISO630-1995; GB / T1591-2018 ； GB / T706-2016 noma iKhasimende liyadingeka
Ubukhulu ingelosi yensimbi L40 * 40 * 3-L250 * 250 * 25; Ipuleti 5mm-80mm
Inqubo Yokukhiqiza Ukuhlolwa kwempahla eluhlaza → Ukuzisika → Ukubumba noma ukugoba → Ukuqinisekiswa kobukhulu → I-Flange / Izingxenye zokushisela → Ukulinganisa → Okushisayo Okushisayo → Ukubuyiselwa kabusha → Amaphakheji → ukuthunyelwa
Welding ejwayelekile I-AWS D1.1
Ukwelashwa komhlaba Idiphu Hot lashukumisa
Ejwayelekile lashukumisa I-ISO1461 ASTM A123
Umbala Kwenziwe ngentando
Fastener I-GB / T5782-2000; I-ISO4014-1999 noma iKhasimende liyadingeka
Isilinganiso sokusebenza kwe-Bolt 4.8 ； 6.8 ； 8.8
Izingxenye ezisele Ama-bolts ama-5% azohanjiswa
Isitifiketi I-ISO9001: 2015
Amandla Amathani ayi-30,000 / ngonyaka
Isikhathi sokuya eShanghai Port Izinsuku ezingama-5-7
Isikhathi sokuthumela Imvamisa kungakapheli izinsuku ezingama-20 kuya ngobuningi besidingo
ubukhulu nokubekezelelana kwesisindo 1%
ubuncane be-oda 1 isethi
Zonke izingxenye zombhoshongo zidlula emshinini wokubacindezela owenzela izinto eziningi ongenza imisebenzi ehlukahlukene njengokugunda, ukushaya isibhakela nokusika. Imishini ye-Hydraulic kanye namathuluzi afanayo, ama-jigs nezinsimbi eziqinisekisa ukuthi izinto ezijiywayo ziphathwa ngaphandle kokuhlanekezelwa. Ama-cranes abekwe ngamasu enza lula ukuphatha izinto ngaphandle kokucindezelwa ngabasebenzi. Yonke imishini ifakwe ukucubungula insimbi ehambisana nokucaciswa okuhlukahlukene isib. I-ISO, ASTM, JIS, DIN.
I-XY Tower ine-protocol eqinile yokuhlola ukuqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo esiyenzayo iyikhwalithi. Inqubo elandelayo isetshenziswa ekugelezeni kwethu kokukhiqiza.
1. Ukwakheka kwamakhemikhali (Ukuhlaziywa Kweladi)
2. Uvivinyo Lokuqina
3. Ukuhlolwa kwe-Bend
1. Ukuhlolwa koMthwalo Wobufakazi
2.Ukuhlolwa Kwamandla Wokuqina Kwokugcina
3. Ultimate eqine amandla test ngaphansi umthwalo eccentric
4. Ukuhlolwa kwe-Cold bend
5. Ukuqina kokuqina
6. Ukuhlolwa kwe-galvanizing
Yonke imininingwane yokuhlola iyarekhodwa futhi izobikwa kubaphathi. Uma kutholakala amaphutha, umkhiqizo uzolungiswa noma usulwe ngqo.
Ikhwalithi ye-Hot-dip galvanizing ingenye yamandla ethu, umphathi wethu uMnu Lee unguchwepheshe kulo mkhakha onedumela eNtshonalanga neChina. Ithimba lethu linolwazi oluningi enqubweni ye-HDG futhi ikakhulukazi kahle ekuphatheni umbhoshongo ezindaweni eziphezulu zokugqwala.
Ejwayelekile lashukumisa: ISO: 1461-2002.
Ubukhulu bezingubo ze-zinc
Ijazi le-Zinc alihlulwa futhi liphakanyiswe ngokushaywa ngesando
Insizakalo yamahhala yomhlangano wombhoshongo
prototype tower Assembly kuyindlela yendabuko kakhulu kepha esebenzayo yokuhlola ukuthi umdwebo wemininingwane ulungile yini.
Kwezinye izimo, amaklayenti asafuna ukwenza umhlangano wesakhiwo sombhoshongo wokuqinisekisa ukuthi imidwebo yemininingwane nokwakheka kulungile. Ngakho-ke, sisahlinzeka ngomsebenzi womhlangano wombhoshongo mahhala kumakhasimende.
Enkonzweni yomhlangano wesakhiwo sombhoshongo, i-XY Tower yenza ukuzibophezela:
• Elungu ngalinye, ubude, isikhundla semigodi kanye nokuhlangana namanye amalungu kuzohlolwa ngokunembile ukuthi kufanelekile yini;
• Ubungako belungu ngalinye namabhawodi kuzobhekwa ngokucophelela kusuka kumthethosivivinywa wezinto lapho kuhlanganiswa uhlobo;
• Imidwebo nebhili yezinto, osayizi bamabhawodi, okugcwalisa njll. Kuzobuyekezwa uma kutholakala iphutha.
Insizakalo yokuvakashelwa kwamakhasimende
Siyajabula ukuthi amaklayenti ethu avakashele imboni yethu futhi ahlole umkhiqizo. Kuyithuba elihle lokuthi zombili izinhlangothi zazane kangcono futhi ziqinise ukubambisana.Kumakhasimende ethu, sizokwamukela esikhumulweni sezindiza futhi sinikeze indawo yokuhlala izinsuku ezingama-2-3.
Zonke izingcezu zemikhiqizo yethu zifakwa ikhodi ngokuya ngomdwebo wemininingwane. Yonke ikhodi izobekwa uphawu lwensimbi engxenyeni ngayinye. Ngokuya ngekhodi, amaklayenti azokwazi ngokusobala ukuthi ucezu olulodwa lolohlobo luni noma iziphi izingxenye.
Zonke izingcezu zibhalwe ngokufanele futhi zahlanganiswa ngomdwebo ongaqinisekisa ukuthi akukho ucezu olulodwa olulahlekile futhi olufakwa kalula.
Imvamisa, umkhiqizo uzolunga ezinsukwini zokusebenza ezingama-20 ngemuva kokufakwa kwediphozi. Ngemuva kwalokho umkhiqizo uzothatha izinsuku zokusebenza eziyi-5-7 ukufika eShanghai Port.
Kwamanye amazwe noma izifunda, njenge-Asia Ephakathi, iMyanmar, iVietnam njll, isitimela sezimpahla zaseChina neYurophu ngomhlaba kungaba yizindlela ezimbili ezingcono zokuhamba.
Imvamisa sithatha ukuhlolwa komzimba nokuhlolwa kwamakhemikhali, ngezansi inqubo yokuhlola kanye nezinto zokusebenza.
Ukuhlolwa Komzimba: Isithando Sokuhlola se-Hydraulic Univerasl & Isivivinyo Sobunzima
Ukuhlolwa Kwamakhemikhali: Ukuhanjiswa Kwamanzi → Isibonisi Sedijithali Spectrophotometer → Ibhalansi Yokuhlaziya → I-Microcomputer Carbon Ne-Sulphur Analyzer
Langaphambilini Umbhoshongo wokudlulisa ongu-500kV
Olandelayo: 330kV double loop transmission tower
IPower Line Tower